China Shoebox Street Light China Manufacturers & Suppliers & Factory
Shoebox Street Light - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Shoebox Street Light)
150W Lụrụ Shoebox Street Light Fixtures
150W Lụrụ Shoebox Street Light Fixtures NKWU NDỊ NA- ECHIKE : Bbier 150W Ejiri okporo ụzọ ụgbọala na-egbukepụ egbuke egbuke na-enwe ọkụ 135lm / watt, 400W HPS / MH nọchite anya. OWU OTU: Bbier Led Street Light Fixtures dị mma ọkpụkpọ mara mma maka afọ 50,000 nke ndụ. MGBE A GA-EKWU: Bbier 150 Watt Led Shoebox Fixtures...
Aluminum Alloy mere ìhè okporo ụzọ 150W
Aluminum Alloy mere ìhè okporo ụzọ 150W NKWU NDỊ NA- ECHIKE : Bbier 150W Na- egbuke egbuke n'okporo ámá na-egbukepụ egbukepụ ọkụ na-enwe ọkụ 135lm / watt, 400W HPS / MH dochie. MGBE OGE OGE: Bbier Led shoebox Ejiri nyocha nke ọma dị mma maka awa 50,000 nke ndụ. NTỤKWU NDỊ NA-EME: Bbier Led Shoebox Fixtures na-abịa...
duziri akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ìhè nchekwa
duziri akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ìhè nchekwa NKWU NDỊ NA-ECHIKE: Bbier duziri akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ nnukwu na-egbuke egbuke na elu lumens irè 135lm / watt, 400W HPS / MH nnọchi. MGBE OGE OGE: Bbier Led shoebox Ejiri nyocha nke ọma dị mma maka awa 50,000 nke ndụ. MGBE A GA-EME: Bbier Led street Fixtures na-abịa...
IP65 150W mere ka ìhè idozi okporo ụzọ
IP65 150W mere ka ìhè idozi okporo ụzọ NKWU NDỊ NA- ECHIKE : Bbier 150W duziri ìhè n'okporo ámá nnukwu na-egbuke egbuke na elu lumens irè 135lm / watt, 400W HPS / MH nnọchi. OWU OTU: Bbier Ejiri akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ dị mma maka afọ 50,000 nke ndụ. MGBE AJỤ AKA: Bbier Led street light shoebox...
ndị na-adọba ụgbọala na-eduzi ìhè ọkụ 150W
ndị na-adọba ụgbọala na-eduzi ìhè ọkụ 150W MGBE EBE EBE EBE: Bbier na-eme ka ìhè na-adọba ụgbọala nnukwu na-egbuke egbuke na elu lumens irè 135lm / watt, 400W HPS / MH nnọchi. OWU OWU OWU : Bbier 150W Led street Light ezi heatsink imeziri maka 50,000 awa nke ndụ. MGBE A GA-EME: Bbier Led street Fixtures na-abịa site...
Ejiri ụgbọala nke ụgbọala na-adọba ụgbọala nke ìhè ọkụ
Ejiri ụgbọala nke ụgbọala na-adọba ụgbọala nke ìhè ọkụ NKWU NDỊ NA-EKWU: Bbier na- eduzi ìhè akpụkpọ ụkwụ na-adọba ụgbọala nnukwu na-egbuke egbuke na elu lumens irè 135lm / watt, 400W HPS / MH nnọchi. OWU OWU OWU: Bbier Parking Lot Light Nke oma bu ihe omuma nke oma maka iri puku ise nke ndu. MGBE A GA-EKWU: Mpaghara...
na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala 150w shoebox pole ìhè
na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala 150w shoebox pole ìhè NKWU NDỊ NA-EKWU: Bbier na- eduzi ìhè akpụkpọ ụkwụ na-adọba ụgbọala nnukwu na-egbuke egbuke na elu lumens irè 135lm / watt, 400W HPS / MH nnọchi. OWU OWU OWU: Bbier Parking Lot Light Nke oma bu ihe omuma nke oma maka iri puku ise nke ndu. MGBE A GA-EKWU: Mpaghara...
100W na-eduzi ụlọ ahịa akpụkpọ ụkwụ
MGBE EBE EBE EBE: Bbier na-eme ka ìhè na-adọba ụgbọala nnukwu na-egbuke egbuke na elu lumens irè 135lm / watt, 400W HPS / MH nnọchi. OWU OWU OWU : Bbier 150W Led street Light ezi heatsink imeziri maka 50,000 awa nke ndụ. NTỤKWU NDỊ NA-EME: Bbier na- adọba chaa chaa chaa chaa na-abịa site na nkedo na-adaba ngwa ngwa...
100W 5000k DLC mere ihe nkedo akpụkpọ ụkwụ
ETL DLC 100W LED Uzo ihu igwe
DLC 100W slipfitter ada akpụkpọ ụkwụ n'èzí ìhè
DLC 100W slipfitter ada akpụkpọ ụkwụ n'èzí ìhè MGBE EBE EBE EBE: Bbier na-eme ka ìhè na-adọba ụgbọala nnukwu na-egbuke egbuke na elu lumens irè 135lm / watt, 400W HPS / MH nnọchi. OWU OWU: Bbier 100W Led Street Light dị mma ọkpụkpọ mara mma maka 50,000 awa nke ndụ. NTỤKWU NDỊ NA-EME: Bbier na- adọba chaa chaa chaa...
Shoebox Street Light Solar Street Light Uk Solar Street Light 60w Led Car Street Light Solar Street Light 100w Ìhè Solar Street Light Sunlight Street Light 20w 30 Watt Solar Street Light